Pigment & Dye - Changzhou longxin Machinery Co., Ltd
Pigment kuyinto into oluyimpuphu esetshenziselwa Umbala. Kuyinto zingaxazululeki emanzini, amafutha, inhlaka kuphela organic, njll, kodwa nombala kungenziwa abahlakazekile lezi abezindaba ukwenza ke Umbala futhi amandla athile elithatha. Pigment kuyinto impahla esisemqoka eluhlaza ngokwenza upende, uyinki, uwoyela Umdwebo unamathisele, enze-up uwoyela upende, umbala iphepha nokunye. Ngaphandle kwalokho, zombala nazo ezisetshenziselwa ukugcwaliswa kanye Umbala zepulasitiki, imikhiqizo, injoloba kanye zokwenziwa fibre uketshezi eluhlaza.
Dye kuyinto kwakwakhe organic eyenza nezinye izinto ezinemibala ngokugqamile, ngokuqinile futhi yaziwa nangokuthi zokwenziwa udayi ngoba iningi labo lisetshenziswa manje kukhona zokwenziwa. Dye zingahlukaniswa zibe amanzi ezithwalwa uginindela, kuphela Borne uginindela, amanzi ezithwalwa umbala okuhlushwa, kuphela umbala Borne lokuhlushwa ngokuvumelana isimo. Ngokusho isicelo, kungashiwo ihlukaniswe udayi ngobumba, enamathela udayi, zendwangu udayi futhi udayi plastic.
Ncoma nemishini sombala & ukudaya ukukhiqizwa: ES / DS abahle eqondile ezintathu roller mil l, DYS uchungechunge wokubacindezela ezintathu roller esigayweni, YS / YSS uchungechunge wokubacindezela ezintathu roller esigayweni, SQ / Jrs uchungechunge ezintathu roller esigayweni, WSP Series Fast Flow sobuhlalo Mill, WST uchungechunge Turbo nano isihlabathi isigayo,